ब्लग कसरी वनाउने ? Blog Tips | मेरो कलम
ब्लग कसरी वनाउने ? Blog Tips
Nepali April 17, 2013
– ईमेलमा एउटा मेल आयो , लेखिएको थियो , तपाईको व्लग म पढ्छु , व्लग भन्या के ? किन व्लग लेख्ने ? कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ ? के कस्ता कुरामा ध्यान दिने ? क-कसले कमाई गरिरहेका छन् , लगायत जानकारी थियो । सवै पोष्टहरु उत्तिकै महत्वपुर्ण थिए तर एउटा कुरा कसरी व्लग वनाउने त ? स्टेप वाई स्टेप सिकाएको भए राम्रो हुने थियो ।
~मेरा कुरा ~
अव, यो पोष्टले भने माछा खान सिकाउने मात्रै हैन , मार्न पनी सिकाउने छ । मेरै केहि साथीहरुले ब्लग भन्या घर वनाउन प्रयोग हुने ‘ईट्टा-टायल- व्लग’ भनेर जोकिङ गर्ने गर्थे अव तिनीहरुको लागी पनी उपयोगी नै हुनेछ ।
ओर्डप्रेस डटकम र व्लगर डटकमवाट विश्वमा वढी व्लग वनेको पाईएको छ । म आफु स्वयमंले ओर्डप्रेसको व्लग/बेवसाईट प्रयोग गर्दै आएको त छु तर पनी गुगलको व्लगर डटकमप्रती नै वढी रुची छ, व्लगर डटकम नै फ्रेन्डली लाग्छ । आर्डप्रेस डटकमवाट कसरी व्लग वनाउने अर्को समय सिकौला तर अहिल्य भने व्लगर डटकमवाट कसरी व्लग वनाउने त ? सवैभन्दा पहिले गुगल एकाउण्ट हुन भने आवश्यक छ ।
www.blogger.com लग ईन गर्नुस् ।
माथी फोटोमा देखाईएझै ईमेल आईडी र पासवर्ड टाईप गरेर साईन ईन गर्नुस् ।
New Blog मा मा क्लिक गर्नुस् । यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले Blog Title , Blog URL , Template छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यहाँ उदाहरणको लागी Blog Demo वनाईदैछ । व्लगको नाम Nepali Blog दिएको छु । त्यस्तै व्लग (ठेगाना) URL : blogkasaribanuni.blogspot.com (व्लग कसरी वनाउने डट व्लगस्पोर्ट डटकम) राखिएको छ । Blog Name खोजी गर्दै गर्दा अरुले प्रयोग गरिसकेको छ या छैन ? हेर्न जरुरी छ । कसैगरी खोजीएको नाममा भेटिएन भने अरु नाममै खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै Dynamic Views टेम्प्लेट पनी छनोट गरिएको छ । र अन्त्यमा Create blog लेखिएको ठाउँमा क्लिक गदैछु ।
ल अव भने व्लग तयार भयो । Your Blog has been created ! लेख्या त देख्नु नै भयो । त्यस्तै अर्को तर्फ पेनको आईकन पनी देख्नुहुन्छ । त्यहा क्लिक गर्नुस् :
अव भने यस्तो वक्स देख्नुहुन्छ । के विषयमा व्लग लेख्दै हुनुहुन्छ ? माथी हेडलाईन राख्नुस्, Body मा भने विस्तृत सामाग्री राख्नुस् । के विषयसगँ सम्वन्धीत छ Labels मा Key word पनी राख्नुस् । र अन्त्यमा Publish मा क्लिक गर्नुस् ।
एक लाईन लेखेर Publish गर्दा यस्तो देखिएको छ । व्लग सफलता पुर्वक पोष्ट भएको छ । अव भने अरुले पनी सजिलै व्लग पढ्न सक्छन् ।
व्लग तयार भईसक्यो । यो भिडियोवाट पनी ‘व्लग कसरी वनाउने ?” भन्ने विषयमा अझै प्रश्ट हुन सक्नुहुन्छ ।
“यो हो नि,ब्लग हिट गराउने ५ पागलपन तरिका”
Nepali April 18, 2013
‘यसरी चर्चित वन्छ Blog’
Nepali April 3, 2013
Nepali January 15, 2013
Bishnu Subedi April 18, 2013 Log in to Reply
व्लग त बनाउनुभयो, अव व्लगलाइ कसरी सजाउने त्यो जान्नका लागि चै यो व्लगमा आउनुस् है ।
Ramkumar Basnet April 18, 2013 Log in to Reply
sir maile ni blog ta bakaye but design haru kasari garne code haru kasari banaune ki kaha bata paune bhanne tha 6ina ready bhaitaheko templete lai kasari aafno blog ma apply garne ? i mean blogger.com le deko haina man6ele bahayeko lai?
SB Gautam April 18, 2013 Log in to Reply
Ramkumar ji, Layout सगै रहेको Template मा जानुस् त्यहाँ दाहिने तर्फ Backup/Restore देख्नुहुन्छ त्यहाँवाट टेम्प्लेट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।
Basnetg April 19, 2013 Log in to Reply
Great tips for new blogger! अनि ब्लगका लागि भने जस्तो टेम्प्लेटहरू चाहिएमा चाही यतातिर जानुस
Smooth Heart April 26, 2013 Log in to Reply
ब्लगको बारेमा टिप्स तथा तरिका हरु जान्न चाहनु हुन्छ भने यहाँ जानुहोला
Basnet sir tapaile template ta bananu hunxa ani post pani garnuhunxa but anya desha ka template designer le free ma download garna dinxan tara tapaile kina dinu hunna ??
hunata 2/4 ota free mai xan tyo ramro kura ho
dipalal ghising April 30, 2013 Log in to Reply
सर नमस्कार blog त बनायो सर तर त्यो फेसबुक लाइक बटम र त्यो माथिको मेनु ट्याब हरु हाल्न सकेन हजुरले केहि जानकारी दिनु हुन्छकी
Basnetg May 1, 2013 Log in to Reply
Kehi Template haru Free ma ni chhan, Kehi Free ma chhaina tyo kura about page ma mention gareko chha,Free ma paye pachhi Designer and Converter ko credit link narakhne hunale kehi template haru free ma chhainan.
Sabai template free ma dina ma badhya chhana,
sanupati May 4, 2013 Log in to Reply
hamro blog ma http://www.yyy.blogspot.com hunxa but http://www.yyy.com kasari bananu ho
SB Gautam May 4, 2013 Log in to Reply
व्लग स्पोर्ट वा ओर्डप्रेसका व्लगहरु निशुल्क हुन् यसको लागी कुनै शुल्क लाग्दैन तर तपाईले भन्नुभएको जस्तो डटकम भएका डोमेनको लागी भने शुल्क लाग्छ । वार्षिक १० डल्लरको अनुपातमा तपाईले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।